ပန်းလှိုင်နေထိုင်မှုဘဝ - အောက်တိုဘာလသတင်းစာစောင်
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများနှင့် မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ/ရှင်။
ကပ်ရောဂါကာလမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် အိမ်မှာနေထိုင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အိမ်မှာနေရတာက တခါတရံမှာ ကိုယ်ရော စိတ်မှာပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတွေရှိနိုင်တာဖြစ်လို့အန္တရာယ်ကင်းကင်း စိတ်ချလုံခြုံစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အစီအစဥ်လေးတွေကို ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အစီအစဥ်လေးတွေထဲမှာ အိမ်မှာနေရင်းလုပ်လို့ရတာမျိုးလေးတွေပါသလို လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးတဲ့ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းလုပ်ဆောင်လို့ရတာမျိုးလေးတွေလည်းစီစဥ်ပေးထားပါတယ်။ ဘာအစီအစဥ်လေးတွေဖန်တီးပေးထားလဲဆိုတာကို တချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာမှာနေထိုင်တဲ့အတွက်ရော အိမ်မှာနေပေးတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားလိုပါတယ်။
METRO မှ အမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် Pop-Up Grocery Market လေးကို အပတ်စဥ် စနေနေ့တိုင်း နေ့လည် ၂ နာရီကနေ ၄ နာရီအထိ Country Store မှာပြုလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန် - Ext: 1502 | 09760112102.
နာမည်ကြီး Gary Player Design ဂေါက်ကွင်းကြီးက ငါးမျှားရာနေရာတစ်နေရာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါလန်းဆန်းတက်ကြွသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးမယ့် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အိမ်ပြင်ပ အပန်းဖြေရာနေရာလေးတစ်ခုအသွင်ပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လှပကျယ်ဝန်းပြီး မျက်စိပသာဒဖြစ်စေတဲ့ ဂေါက်ကွင်းနှင့် သာယာတဲ့ရာသီဥတုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ပျော်ပွဲစားထွက်ရင်း မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
ပျော်ပွဲစားအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို Country Store မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ် Zumba ပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိကကျတာကတော့ ကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရှိဖို့ပါပဲ။
ထောက်လှမ်းရှာဖွေခြင်း (Contact Tracing)
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများအနေနှင့် ပင်မဂိတ်တွင် QR code ကို scan ဖတ်၍ အမည်နှင့်ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပတ်များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ မည်သည့်နေရာများသို့သွားရောက်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကို သိရှိနိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထောက်လှမ်းရှာဖွေမှု (Contact Tracing) ကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အခုလိုမျိုး ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နေရတဲ့ကာလမှာ သင်ကိုယ်တိုင်ရော ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုပါ မကြာခဏလက်ဆေးခိုင်းခြင်းဖြင့် ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ပါ။
BUGGY BONUS ဝန်ဆောင်မှု
Buggy ဝန်ဆောင်မှုကို နေအိမ်မှ Country Club သို့ပို့ဆောင်ပေးတာအပြင် ပင်မဂိတ်သို့သွားရန်လမ်းကြောင်းကိုပါ ထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ နေ့စဥ် နံနက် ၇ နာရီမှ ည ၈နာရီအထိ။ ဆက်သွယ်ရန် - Ext: 1461 | 09955400911.
YOMA CAR SHARE AT 50% DISCOUNT
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများအနေနှင့် ပိုမိုလွယ်ကူလုံခြုံစိတ်ချစွာ သွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ promo codes များကိုအသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုက်ပါ။ website (သို့မဟုတ်) mobile app မှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
DOCUSERIES PART4 #STAYSAFEYANGON
မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာနေရာအနှံ့က နိုင်ငံတွေက Covid-19 ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီး ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတဲ့ ပုံစံတွေကလည်း ကွာခြားပါတယ်။ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာမှာတော့ ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင် တမူထူးခြားတဲ့
pop-up အစီအစဥ်လေးတွေကို လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးတဲ့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာတွင်းမှာ နေထိုင်သူတွေရဲ့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရေးအတွက် ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
GOING WILD သဘာဝက ဖန်တီးပေးထားတဲ့ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာမှာဖြစ်စေ၊ ကြယ်စင်မြို့တော်အိမ်ရာမှာဖြစ်စေ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေ၊ သစ်ပင်တွေနဲ့ ငှက်ကလေးတွေအကြောင်းဖော်ပြပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးများကို here ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
PUN HLAING LIVING ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းက သဘာဝအလှအပတွေကို ကြည့်ရှုခံစားရင်း #PunHlaingLiving ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲလေးမှာ အလှဆုံးပုံလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်လိုက်ပါ။
CIY BY CHEF PAKDEE နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ အဆာပြေ စားလို့ရရုံတင်မကပဲ ညစာအနေနဲ့သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ အရသာရှိပြီး ပြုလုပ်ရလွယ်ကူတဲ့ Avocado Toast လေးကို ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာရဲ့ Chef Pakadee နဲ့အတူတူ လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။5Minute Avocado Toast
PIZZA WOWNESDAY & PASTA THURSDAY တခုဝယ်ရင် တခုလက်ဆောင်ရမယ့် ပီဇာနဲ့ပါစတာ ပရိုမိုးရှင်းလေးတွေကို အပတ်စဥ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ ကြာသာပတေးနေ့တိုင်းမှာ Oasis Bistro ကနေ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်သလို အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါပြီ။ Terms and conditions apply. မှာယူရန် - Ext: 1513 | 09407496700.
CURRY PARTY FRIDAY သောကြာနေ့လေးကတော့ မြန်မာဟင်းပွဲတွေနဲ့ အာရှအစားအစာဟင်းပွဲလေးတွေကို မြည်းစမ်းနိုင်မယ့်နေ့လေးပါ။ အနှစ်အရသာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဟင်းပွဲတွေကို ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်သလို အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာဝက်သားဟင်း - ၁၀၀၀၀ ကျပ်
မြန်မာငါးဟင်း - ၇၅၀၀ ကျပ်
မြန်မာဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်း - ၄၅၀၀ ကျပ်
ထိုင်းစတိုင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်း- ၇၅၀၀ ကျပ် Terms and conditions apply. မှာယူရန် - Ext: 1513 | 09407496700.
စုံစမ်းရန်: +9594 2171 7676 | soeyanpaing@yomaland.com